Tag: diagonals | Martech Zone
Torohevitra 9 amin'ny fitambarana haka sary mahaliana
Talata, Jona 30, 2015 Talata, Jona 30, 2015 Douglas Karr
Ity dia mety ho iray amin'ireo fanangonana tsara indrindra amin'ny torohevitra momba ny sary izay hitako tamin'ny Internet. Lazaina ny marina, mpaka sary mahatsiravina aho. Tsy midika izany fa tsy manana tsiro tsara aho. Talanjona foana aho amin'ny zavakanto tsy mampino novokarin'ny namantsika Paul D'Andrea - mpaka sary malaza sy namana akaiky eto Indianapolis. Miantso azy izahay mba hanao asan'ny mpanjifa betsaka ho anay satria manao tsinontsinona ny fampiasana sary stock